UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho KwaZulu-Natal, uMnuz Ravi Pillay, esika iribhoni ngesikhathi kuvulwa i-D Chem, eqalwe uNksz Nomandla Ngcoya, (ofake okuluhlaza) Isithombe: SABELO NSELE
Sabelo Nsele | April 22, 2021
WALIQALA ngoR1 200 nje vo, ibhizinisi lokukhiqiza izinto zokuhlanza nezokunukisa kahle kepha manje usevule inkampani entsha.
NgeSonto kuvulwe ngokomthetho inkampani kaNksz Nomandla Ngcoya (28), iDChem edolobheni eliseMgungundlovu. Ibhizinisi likhiqiza izinto zokuhlanza ezinjengensipho yokuwasha izitsha, okokukhuculula endlini phansi kanye nokokunukisa kamnandi endlini nasemotweni. Ingakwazi ukukhiqiza amalitha angu-10 000 ezimpahla zokuhlanza ngosuku.
Echaza ngokuqala kwakhe ibhizinisi uNksz Ngcoya, uthi waphonsa imali ewuR1 200 kuphela ukwenza umkhiqizo wakhe wokuqala ngo-2016. “Ngakwazi ukukhiqiza u-25 litha wensipho yokuwasha izitsha ngaleyo mali.”
Kepha uNksz Ngcoya uthi akuzange kube lula ukudayisa lowo mkhiqizo wokuqala.
“Kwangithatha izinyanga eziyisishagalombili ukuba ngikwazi ukudayisa umkhiqizo. Ngesikhathi ngizama ukudayisa, abanye abantu babevele bengitshele ukuthi bafuna isampula ukuze bawubone ukuthi uyasebenza ngempela. Ngangiyaye ngibabuze ukuthi nasezitolo ezinkulu bayayicela yini isampula.
“Abanye abantu babevele bafune ukuthatha ngesikweletu, bathi bazokhokha uma kuwukuthi umkhiqizo uyasebenza ngempela. Ngazithola ngilahlekelwa uR13 000 ngenxa yabantu abakweletayo, ” kuchaza uNksz Ngcoya.
Echaza ngothando lokungena kule ndima, uNksz Ngcoya uthe uthando lwaqala ngesikhathi esakhula.
“Ekhaya sasineqhuzu lensipho eluhlaza. Leli qhuzu lalisetshenziselwa ukuwasha izitsha, izingubo nokugeza. Ngabona sengathi ayikho inhlanzeko kulokhu. Yingakho ngaba nephupho lokuqala imboni ezokhiqiza izinsipho ezahlukene.”
Ngokusho kukasomabhizinisi sezikhona izitolo ezinkulu eMgungundlovu, esezidayisa imikhiqizo yakhe. Uthe ukwazile ukuvula amathuba emisebenzi kubantu abayisithupha, kanti njengoba sekuvulwe inkampani, uzophinde aqashe abanye abane.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho KwaZulu-Natal, uMnuz Ravi Pillay obekhuluma ngesikhathi kuvulwa ngokomthetho ibhizinisi, uthe bayaziqhenya ngegxathu elithathwe nguNksz Ngcoya.
UPillay uthe umnyango uzomeseka usomabhizinisi kuleli phupho analo lokubalwa nezinye izikhondlakhondla, ezikhiqiza izinto zokuhlanza e-Afrika.